21 kuNhlolanja- Usuku loLimi lweBele Emhlabeni Wonke Jikelele – Bhiyoza Publishers
You are here: Home / Blog / Uncategorized / 21 kuNhlolanja- Usuku loLimi lweBele Emhlabeni Wonke Jikelele
Ngomhla ziyi-17 kuLwezi ngowe-1999, inhlangano emele izindaba zamazwe omhlaba (UNESCO) yamemezela usuku lwangomhla zingama-21 kuNhlolanja njengosuku lolimi lwebele umhlaba wonke jikelele. Lolu suku lugujwa minyaka yonke kusukela ngonyaka wezi- 2000 kuNhlolanja. Inhloso yalolu suku ukukhuthaza izilimi kanye namasiko ahlukahlukene kanjalo nobuliminingi. Kungani kwakhethwa uNhlolanja kungakhethwa olunye usuku noma enye inyanga? Impendulo kulo mbuzo isobala. Ngalolu suku ngonyaka we-1952, umbutho obizwa nge-Bengali Language Movement walwela ukugunyazwa kokusetshenziswa kolimi ‘Bangla language’ ukuba lukhulunywe embusweni wasePakistan. Lo mbutho wawufuna ukuthi lolu limi lusetshenziswe njengolimi olusemthethweni kuhulumeni, ezikoleni, kwabezindaba, kwezezimali kanye nasezitenjini ezisemthethweni.
Okwenzeka ngolimi iBengali singakufanisa nalokhu okwenzeka kuleli lengabadi. NgoNhlangulana kowe-1976, abafundi baseSoweto balwa belwisana nohulumeni wengcindezelo owawusuqoke ulimi lwesiBhunu njengolimi okuyimpoqo ukufunda nokufundisa ngalo ezikoleni zabantu abamnyama. Ngalokho umbuso wagcina uphoqeleka ukuba usiguqule isinqumo sawo. Emuva kokuzimela kwezwe laseNingizimu Afrika, uhulumeni wentando yabantu wagunyaza ukusetshenziswa nokukhulunywa kwezilimi eziyisishiyagalolunye okuyiziLimi zoMdabu wakuleli, okufaka phakathi ulimi lwesiNgisi kanye nolwesiBhunu. Ekugcineni izwe laseNingizimu Afrika lase liba yizwe ilenezilimi eziningi kanye namasiko ahlukahlukene.
Emuva kokumenyezelwa kwezilimi eziyi-11 njengezilimi ezisemthethweni, uhulumeni wabe esesungula amakomidi ezilimi ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi iziLimi zoMdabu ziyathuthukiswa. Inhlangano ebizwa ngePanSALB (Pan South African language Board) yasungulwa ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi zonke iziLimi zoMdabu ziyathuthukiswa futhi ziyakhulunywa ngokukhululeka. Bonke abantu baseNingizimu Afrika sebeyakwazi ukuzethula nokuphefumula besebenzisa ulimi abaluthandayo.
Ekukhuthazeni ukusetshenziswa kolimi lwebele, lokhu kusho ukuthi wonke umuntu kumele akhulume ulimi lwakhe, abhale ngolimi lwakhe aphinde afunde izincwadi ezibhalwe ngolimi lwakhe. Ngokwenza njalo, bayobe bethuthukisa izilimi zabo ngokwempela, okubalwa phakathi amasiko abo, kanye namagugu. Ekuqapheleni ukubaluleka kolimi, inhlangano yamazwe omhlaba okuyi-UNESCO ibe isimemezela unyaka wezi-2019 njengonyaka weziLimi zoMdabu umhlaba wonke jikelele ngenhloso yokugcizelela ukuthi kumele sigubhe siphinde sithuthukise izilimi zethu hhayi ngosuku nje kuphela kepha unyaka wonke.
Phambili ngeziLimi zoMdabu wase-Afrika phambili! Ziqhenye ngolimi lwakho lwebele!
Leli phepha lombono libhalwe laphinde lahunyushwa nguMenzi Thango, uMsunguli noMqondisi wenkampani iBhiyoza Publishers.
Attending #SABF2019 with Michael Currin, Tumelo Moleleki and Dr. David wa M... Ngokukhuluma nje isilungu sewuhlakaniphile?